Bayakhula o-DJ abasebancane | News24
Bayakhula o-DJ abasebancane
uSbongile Songelwa owaziwa ngoLadySboh (kwesobunxele) noLindelo Hlongwane owaziwa ngoPradah.ISITHOMBE: sithunyelwe
LIBUKEKA liqhakazile ikusasa kwezomculo ko-DJ besifazane abasebancane njengoba bezokhipha elinye icwecwe labo elisihloko sithi Sophenduka ngasekupheleni kwenyanga kaMfumfu (October).
USbongile Songelwa (24) nowaziwa ngo-LadySboh benoLindelo Hlongwane (25) nowaziwa ngo-Pradah bathi iphupho labo ukuthi bagcine sebekwazi ukukhipha i-album yabo.
Bexoxa ne-Echo uLadySboh uthe ngaphandle kwale ngoma abazoyikhipha ikhona enye abakade besanda kuyikhipha esihloko sithi Asibambeki nalapho bebambisene khona no Muvo De Icon, Zolani beno DJ Lusiman. Uthe ngemuva kokuyikhipha lengoma babe sebeshutha i-music video yakhona nejwayele ukubonakala kakhulu kwi-channel yaka-DSTV i-MTVbase (Chanel 322).
“Into esiyifunayo ukuthi nathi sikhule emculweni sigcine sesingo-DJ abaziwayo. Sifuna ukubeka o-DJ besifazane base Mgungundlovu kwibalazwe kwaziwe ukuthi nathi endaweni yethu sinalo ithalente.
“Ngiyawuthanda kakhulu umculo kanti nokuba ngu-DJ. Ukuqala kwami ukudlala ngaqala ngineminyaka eli-14 ubudala ngifundiswa umalume wami ngoba naye wayengu-DJ. Ngangihleli ngimbuka njalo uma ngabe enza into yakhe kwaze kwaba uyaqala nami uyangifundisa. Umsebenzi wami wokuthi nginandise ebantwini ngawenza ngineminyaka eli-15 kuphela kusuka lapho ke angibange ngisabhekaemuva,” kubeka yena.
Uqhube wathi ngesikhathi eqala ukungena kwezomculo abazali bakhe babengathandi bethi akabhekane nesikole ngoba isona esihamba phambili kwazise naye wayesemncane ngokweminyaka.
“Nakuba ngasengingenile emculweni umsebenzi wami wesikole kanye nemfundo ibiloku ihamba phambili kumina njengoba namanje kusanjalo. Ngemuva kokuba abazali babona ukuthi ngiwuthanda kanjani umculo babe sebeqala ukungeseka njengoba besakwenza namanje kanti ngiyakujabulela kakhulu,” kubeka yena.
uPradah yena uthe baqala ukuhlangana noLadySboh ngonyaka wezi-2013 behlanganiswa omunye u-DJ wesifazane kanti kusuka lapho bebeloku besebenzisana kuze kube imanje. Uthe yena ukukhula kwakhe ukhule engumuntu owuthandayo umculo kwaze kwaba ukuthi nomama wakhe uyabona ukuthi uyawuthanda wabe esemutholela umuntu ozomufundisa ukuba u-DJ.
“Seloku siqalile ukusebenzisana noLadySboh sibambisene kahle kakhulu kanti futhi ngiyathemba ukuthi sizoqhubeka kanjena kuze kube siyaphumelela sihambe amazwe ngamazwe ngethalente lethu,” kuphetha yena.